Atlas Copcoconsolidates imisebenzi yemigodi Chinese - China Tianjin Longtop Mining
Atlas Copcoconsolidates imisebenzi yemigodi Chinese
Le nkampani ithe nyathelo liza kwandisa ukusebenza nokomeleza kwinkampani elizayo.
Atlas Copco kuzakuvala indawo yayo e Shenyang, leyo silwenza izilumkiso iliwa becala ngesandla-zigcinelwe lezemigodi kunye nolwakhiwo, amaNgqina efudukela imisebenzi kwisityalo Zhangjiakou. E Shenyang, malunga 225 abantu baya kuchaphazeleka.
E Zhangjiakou, Atlas Copco okwangoku uvelisa phantsi-i-umngxuma lwezixhobo ukubaqhelisa blastholes, imithombo yamanzi kunye izicelo zamandla okuvela. Kule ndawo, malunga 45 abasebenzi ziya kongezelelwa notyalo eyenziwe ukwanda kwiziko noomatshini entsha.
"Thina babe nephothifoliyo omkhulu imveliso eTshayina, kodwa imfuno buthathaka kwiimalike lezemigodi kufuneka siqinisekise ukuba sisebenzise amandla ethu ngendlela eyiyo," watsho Johan Halling, umongameli kummandla woshishino Technique Mining and Rock kwakusembiwa.
"Ukuhlanganisa imisebenzi kuya kusinceda sihlale olomeleleyo elizayo. Siza kuxhasa abasebenzi abachaphazelekayo kule meko esinzima. "
Zombini imisebenzi bakhonza kuqala imarike Chinese zasekhaya.